शारीरिक सम्बन्धपछि किन भावुक हुन्छन् मान्छे – Health Post Nepal
शारीरिक सम्बन्धपछि किन भावुक हुन्छन् मान्छे
२०७७ माघ ५ गते ८:२१
जब कुनै जोडिको बीचमा प्रेम हुन्छ उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध हुनु सामान्य कुरा हो। केटा होस् वा केटी प्रत्यक पटक शारीरिक सम्बन्ध हुँदा केही न केही नयाँ फिलिङ हुन्छ।
एक आपसमा जतिसुकै प्रेम किन नहोस्। तर, उनीहरू शारीरिक सम्बन्धपछि भावुक हुन थाल्छन्। यस्तो हुँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरू रुनथाल्छन् त कतिपय अवस्थामा चिडचिडाहटपन हुन्छ। तर, तपाई यो कुरालाई लिएर के सोच्नुहुन्छ? र, यस्तो कित हुन्छ त?
शारीरिक सम्बन्धपछि कुनै महिलाको मुड बिग्रीन्छ। र, त्यस्तो अवस्थामा ती महिलामा चिडचिडाहपन लाग्न थाल्छ। उनीहरू केही पनि ठिक नभएको जस्तो महशुस गर्न थाल्छन्। धेरै महिलामा यस्तो खाले समस्या हुन्छ। यस्तो हुनुको पछाडि बैज्ञानिक कारण पनि हुन्छ।
इन्टरनेस्नल सोसाइटी फर सेक्शुअल मेडिसिनका अनुसार उक्त फिलिङलाई पोस्टक्वाइटल डिस्फोरिया वा पोस्ट सेक्स ब्लुज भनिन्छ। आफ्नो मन लाग्दालाग्दै पनि राखिएको शारीरिक सम्बन्धबाट उनीहरूमा गहिरो दु:ख वा चिडचिडाहटपन पैदा हुन्छ। यस्तो भावना महिला वा पुरुष जसमा पनि आउन सक्छ।
पोस्टक्वाइटल डिस्फोरियाको त सहि कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। तर, मेडिसिनिया पत्रिकाको एक रिपोर्ट अनुसार यो केही हैरानी पैदा गर्ने अनुभव हो। शारीरिक सम्बन्धको समयमा पार्टनरसँगको अनुभव रमाइलो होस, नरमाइलो होस् वा सामान्य। यो कारणले मानिसलाई फरक-फरक तरिकाबाट प्रभावित गर्छ।
शारीरिक सम्बन्धका दौरान केही मानिस रुन थाल्छन्। केहीमा बेचैनी हुन्छ। पार्टनरसँग भावनात्मक रुपमा नजोडिकनै शारीरिक सम्बन्ध भयो भने त्यस्ता मानिसमा रुन मन लाग्ने हुनसक्छ।
तर, सधै यस्तो हुँदैन। विशेषज्ञका अनुसार शारीरिक सम्बन्धपछि भावुक हुनु हार्मोनको कारण हो। जब स्त्री र पुरुषको बीचमा शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ दिमागमा डोपामाइन रिलीज हुन्छ। जसले गर्दा मानिसले भावुकता महशुस गर्नेगर्छन्। भावुकता त्यो बेलाको परिस्थितिमा पनि निर्धारित हुनेगर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा तपाई त्यो समयमा सम्बन्ध बनाउनको लागि मानसिक रूपमा तयार हुनुहुन्थेन भने शरीरमा चिडचिडाहट पैदा हुनसक्छ। यो समस्या महिलामा मात्र नभएर थुप्रै अध्ययनले पुरुषमा पनि हुने देखाएको छ। यो समस्या लगातार आइरहेको भए सेक्सोलोजिस्ट, साइकोलोजिस्ट वा चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ।